I-Kildare Archives - IntoKildare
Idolobha laseKildare lisukela ku-5th century futhi ithatha igama layo eGaelic, Cill Dara okusho iSonto le-Oak, isigodlo sezindela esasungulwa nguSt Brigid esizeni ngaphansi kwesihlahla se-oki. Idolobha licebile ngamagugu nomlando kanye ne-19 yasekuqalenith Ikhulu leminyaka i-Market House ikunikeza amazwibela esikhathi esedlule ngokusebenzisa isipiliyoni sangempela esibonakalayo esigxilile, isiqalo esihle sokuvakasha kwakho. I-St Brigid's Cathedral kanye ne-Round Tower ziseduze - umbhoshongo umi cishe ngamamitha angama-33 ukuphakama futhi ungumbhoshongo oyindilinga okhuphukela phezulu e-Ireland, uzoqiniseka ukuthi uthola umbono omuhle wedolobha kanye neCurragh Plains. I-St Brigid's Well iwuhambo olufushane futhi ukuvakashela e-Solas Bhride Hermitages kuzomtshela indaba yakhe.
Umjaho wokuqala wezimoto wamazwe omhlaba ozokuba eBrithani noma e-Ireland, iGordon Bennett Cup, udlule eKildare. Ezikhathini zamanje leli dolobhana liyindawo okuya kuyo ama-shopaholics avakashela iKildare Village kanye nosuku oluhle lokuphuma e-Irish National Stud and Gardens edumile emhlabeni.
ILily & Wild ingumlingani wakho ophelele wamamenyu athokozisayo endawo nawesizini ngensizakalo yokudla yokudla engenakulinganiswa.